Francia Márquez: Ilay mpitarika Afro-Kolombiana miha-mahazo vahana hahazo ny toeran’ny filoha · Global Voices teny Malagasy
Francia Márquez: Ilay mpitarika Afro-Kolombiana miha-mahazo vahana hahazo ny toeran'ny filoha
Eo am-panoratana tantara sahady izy
Voadika ny 23 Marsa 2022 4:49 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, Português, Español
Francia Márquez. saripikan'i Darwin Torres, nahazoana alalana.
Lasa fantatra ny anaran'i Francia Márquez Mina tamin'ny taona 2018 rehefa nahazo ny Loka Ara-Tontolo Iainana Goldman noho ny asany nanohitra ny fitrandrahana tsy ara-dalàna nisy tao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy izy. Ankehitriny izy mirotsaka hofidiana ho filohan'i Colombia.
Ny fijoroany manohitra ny fanavakavaham-bolonkoditra, ny fanjakazakan-dehilahy, ny kolikoly ary ny fitrandrahana harena voajanahary tao Colombia no mahatonga azy ho saimbôlin'ny fifaharana misolotena ireo vahoaka an-tapitrisa tratran'ny fanesorana ny tany aminy, tratran'ny kolikoly sy herisetra.
Ny filozofia ara-politikan'i Márquez dia aingam-panahy avy amin'ny Ubuntu, voambolana Zulu sy Xhosa izay midika hoe “Izaho noho isika (misy aho satria misy isika).” Io tsirinkevitra Afrikana Tatsimo io no lasa teny tarigetran'ity mirotsaka ho =kandidà ity, izay manamarika ny filozofian'ny fokonolona sy ny fifampiankinana. “Rohy amin'ny rojo aho ka tsy ho eto no ho tapaka ny rohy,” hoy izy nandritra ny fihaonambe feminista iray tamin'ny taona 2021.
“Izaho noho isika” no fango sy tarigetran'i Francia Marquez. Saripika: Wikimedia commons (CC BY-SA 4.0)
Ny tolo-keviny dia miompana amin'ny fiaraha-manangana avy eny ifotony sy ny fampiatiana ireo mponina rehetra voahilika ara-tantara. Ny fampielezan-keviny sy ny lahateniny kosa nifantoka tamin'ny vehivavy, ny vazimba teratany sy ny taranaka Afrikana, ary ny vondrom-piarahamonina LGBTQ+.
Tamin'ny fitetezana ireo tanàna lehibe ao Colombia izy nahazo vahoaka maro, marevaka, feno hira sy fanantenana ho an'ireo mahita an'i Francia Márquez Mina ho vehivavy iray mitovy amin-dry zareo ny tantarany sy avy amin'ny faritra sy tontolo ara-tsosialy toa izany koa, tsy tahaka ireo Kolombiana sangany sangany izay manjakazaka amin’ny sehatra politika.
Nahazo ny Loka Goldman izy taorian'ny fikatrohana ara-piarahamonina maharitra dia maharitra izay nandaminany ireo vehivavy tao an-tanànan'i La Toma, any an-tendrombohitra Cauca, mba hampitsaharana ny fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna eo amin'ny tanindrazany tamin'ny taona 2014. Avy eo i Márquez nitarika vehivavy miisa 80 naharitra 10 andro nanavatsava lalana lalana mirefy 565 kilaometatra mankany an-drenivohitra Kolombiana. Vokatr'ity fanentanana ity, nandao ny faritany avokoa ireo mpitrandraka sy fitaovana tsy ara-dalàna rehetra.
Tamin'ny fotoana nanekeny ny loka, nanambara mazava ny fitarihany amin'ny tolona ara-tontolo iainana i Márquez, sy ny fanentanana amin'ny tolona taranaka Afrikana, ary ny fanoloran-tenany ho amin'ny fahafahana, ny rariny ary ny marina :
Vehivavy taranaka Afrikana aho. Lehibe tao amin’ny faritanin’ny raza(ko) efa niorina tao hatramin’ny taona 1636. Efa hatramin’ny fahazazako no nampianarina anay ny hasarobidin’ny tany. Fantatray fa tsy fanomezana ny faritany izay anorenanay fiaraha-monina sy ikolokoloanay ny kolontsainay, satria nandany taona maro niasana sy niaretana tany amin'ny toeram-pitrandrahana sy toeram-pambolen'ny andevo ny (razanay sy ny) zokiolonay. Ny fitaizana eo amin'ny fiaraha-monina misy ahy dia mifototra amin'ny soatoavina toy ny firaisankina, ny fanajana ary ny fahitsiana.
Noho izany, ao anatin'ny faha-36 taonany izao i Márquez, manohy manameloka toe-javatra iray mampahory tsy ny faritra misy azy ihany fa ny faritra ara-drazana, mainty sy vazimba teratany maro hafa koa. Nanao vivery ny ainy mihitsy aza izy tao amin'ny firenena iray izay, araka ny filazan'ny Amnesty International, dia “firenena mahafaty indrindra ho an'ny mpiaro ny zon'olombelona.”
Any Colombia, anisan'ny vondron'olona voahilikilika ara-tantara ny vahoaka taranaka afrikana, noho izy ireo avy amin'ny fanandevozana ny vahoaka Afrikana. Amin'izao fotoana izao, mbola iharan'ny fanavakavaham-bolon-koditra ara-drafitra, ny vono olona, ​​ary ny famindran-toerana an-katerena izy ireo noho ny ady mitam-piadiana, fanondranana zava-mahadomelina, ary fakana an-keriny ny taniny ataon'ireo orinasa mpitrandraka harena sy hazo.
Amin'izao fotoana izao, i Márquez ao anatin'ny “Dina manan-tantara ho an'i Colombia“, fivondronan'ny antoko ankavia sy afovoany-havia izay hanao ny fakan-kevitra nasionaly amin'ny 13 marsa hisafidianana ny kandidany amin'ny fifidianana filoham-pirenena ao Colombia amin'ny Mey 2022. Amin'izao fotoana (anoratana ny teny anglisy) izao, Gustavo Petro, loholona sady ben'ny tanànan'i Bogotá teo aloha, no mitarika amin'ny fitsapan-kevitra alohan'ny fifidianana.
Tsy sahala amin'ireo mpilatsaka hofidiana hafa, tsy za-draharaha loatra eo amin'ny sehatra politika i Márquez. Na dia teo aza izany, dia nampahafantatra ny tenany amin'ny maha izy azy izy: mpisolovava mainty hoditra, reny, loham-pianakaviana, ary mpitarika vondrom-piarahamonina izay nandany ny ankamaroan'ny fiainany tamin'ny maha-mpikatroka ara-tontolo iainana sy ny zon'olombelona. Hatramin'ny vao haingana, fantatra indrindra teo amin'ireo vondrom-piarahamonina taranaka afrikana sy hetsika ara-tontolo iainana izy, saingy nahatonga azy hisongadina ny mombamomba azy sy ny heviny, ary ny tanjaka nanehoany ny tenany ho anton-dresaka sy ny maha-tsy nampoizina azy ho an'ny firenena. .
Nandritra ny valan'aretina, sy noho ny famerana ny vahoaka sy ny kianjam-bahoaka, nameno ny media sosialy tamin'ny hafatra, fivoriana, sary, mozika, ary ny fanohanan'ny tsirairay sy ny vondrona sosialy ny fampielezan-kevitr'i Márquez.
Tumaco | Andao hiainga avy amin'ny fifaharana ka hatramin'ny fahefana #HastaQueLaDignidadSeHagaCostumbre (MandrapahatongaNyFahamendrehanaHoFahazarana).
Niaraha-natao tamin'ny vahoaka ity velirano ity!
Ho an'ny Kolombiana maro, efa nanoratra toko vaovao teo amin'ny tantaran'i Colombia i Márquez, vehivavy Afro-Kolombiana, ary kandidà ho filoham-pirenena. Ity vehivavy ity, izay notandindomin-doza ny ainy noho ny fahavitrihany ary nahita ny mpiara-belona namoy ny ainy tamin'ny fiarovana ny aina, no nanjary ohatra velona tsy ho an'ny vehivavy mainty hoditra toa azy ihany, fa ho an'ny vahoaka Afro-Kolombiana rehetra koa mba hahafahan'izy ireo mahafantatra fa azo atao ny manoritra hoavy hafa.
Ao anatin'izany fanjohin-kevitra izany, namehy ny firotsahany hofidiana ho filoham-pirenena amin'ny fomba ofisialy toy izao manaraka izao ity vehivavy mainty hoditra voalohany nirotsaka ho amin'izany teo amin'ny tantaran'i Colombia ity:
Lazao amin'i Colombia fa 200 taona aty aoriana, ny zafikelin'ireo vehivavy nodorana velona noho ny niterahana ny fahafahana sy ny fahamendrehana ho an'ity firenena ity no mamory ny heriny rehetra, ny fitiavany rehetra, ny fanoloran-tenany rehetra, mba hahatonga an'ity Colombia ity ho toerana tsara kokoa. Mba ho velona amim-pahamendrehana ny zanatsika lahy sy vavy. [Manao izany] aho satria misy izahay amin'ny maha-vahoaka anay ary tsy ho ketraka, oadray mihitsy! .